Your Photos in Video leexo la Photo si Video Converter f
> Resource > Beddelaan > Your Photos in Video leexo la Photo si Video Converter
Haddii aad soo ururiyay badan oo sawiro iyo aad u danaynaya diinta sawiro aad u video ama DVD , ka dibna waxaad u timaadeen inaad meel sax ah. Tutorial waxay ku saabsan tahay sawiro video / DVD slideshow jeestay oo sawir weyn oo video converter- Wondershare Fantashow . Waxay kaa caawin karaan inaad noqon sawirada weli aad u cajiib ah video slideshow, oo waa inuu ku shubaa bandhigay hor saaxiibadaa, qaraabada iyo marti sharaf. Waa kuwan sida:
1 Run Fantashow iyo Dooro Style ah
Download, rakibi oo ay maamulaan Converter sawirkan. Gal markaas dhirtuba kala duwan oo cajiib ah Hababka video maktabadda qaabka (waxaa jira boqolaal free video Hababka in loo isticmaali karaa goor oo kala duwan, sida aroos, dhalashadiisa, qoyska, iwm). Soo qaado Hababka aad jeceshahay ka dibna riix "codso" si aad u bilowdo.
2 Import faylasha iyo shakhsiyeeyo Your Video
Ka dib codsanaya qaab, in aad ku "Personlize" tab tegi doonaa. In tab this, aad dajiyaan karaa sawir ama video gal ah ama si toos ah jiidi oo hoos u sawiro iyo videos si aad u storyboard ah. Double click inay isku shaandheyn, dalagga ama kor loogu qaado la saamaynta gaar ah sida uu yahey, Black & White, Sepia, X-ray, Wajigooda, iwm
Markaas riix "Add Music" thumbnail ku darto music aad video si ay u sii cad ah. Waxaad sidoo kale soo dhoofsadaan kartaa adiga kuu gaar folder music ama isticmaal maktabadda music ballaaran. Waxaa intaa dheer, in la sheego sheeko ka dambeeya sawiro ama videos, aad ugu qortid cod u gaar ah ayaa sidoo kale waxaa la heli karaa. Si tan loo sameeyo, ka heli files bartilmaameedka oo guji "Record" ayuu icon. Dabcan, waxa kale oo aad ku dari kartaa qoraalka si maldahan ee macnaha qarsoon ee photos videos ama aad. Halkan saamaynta qoraalka cajiib ah ayaa la siiyaa si ay u sahamiyaan aad.
Haddii aad rabto in aad video ka sii xirfad raadinaya, soo qaado fiican "Intro / Credit" ama codsan Hababka dheeraad ah oo aad jeceshahay.
3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo Beddelaan Photos in Video / DVD
Guudmar shuqulladiinna, haddii qancay, tag "dhoofinta" tab, guji icon DVD iyo talooyin DVD disc ah si ay u gubaan sawiro aad u DVD. Waxa kale oo aad ku badbaadin karto sawiro digital in qaabab kale video, sida MP4, AVI, wmv, iwm Ama toos geliyaan aad video in YouTube wadaaga dad badan isla.
Ka qaada sawiro aad, iyo bilaabaan in ay jeedi photos jecel in videos la Wondershare Fantashow hadda!